Manchester United ayaa ka laabatay go’aankii ay ku shaqaaleysiisay garabka kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho waxayna taa badalkeeda diirada u saartay laba ciyaartoy oo kale.
20 jirkaan garabka ka ciyaara ayaa bartilmaameed u ahaa Manchester United intii lagu jiray xagaagii, laakiin Borussia Dortmund qiimaha sare ee ay heshay ayaa ka hor istaagtay Red Devils inay la soo wareegto.
Farqiga dhaqaale ee u dhexeeya Manchester United iyo Borussia Dortmund wuu yaraa, laakiin maadaama fayraska Corona uu hoos u dhigay dhaqaalaha, United waxay lumisay xiisihii ay u qabtay saxiixa Jadon Sancho oo Borussia Dortmund ayaan wax tanaasul ah samayn.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa la rumeysan yahay inuu talaabo u qaadi doono ciyaaryahanka marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaagan si uu u xoojiyo weerarkiisa iyo tayada kooxdiisa.
Laakiin sida laga soo xigtay The Athletic, United ayaa sii kordhineysa xiisaha ay u qabto Jadon Sancho waxayna dooneysaa labo ciyaaryahan oo kale si ay u bedelaan.
Solskjaer ayaa la sheegay inuu la dhacsan yahay waxqabadka da ‘yarka Amad Diallo, kaasoo bedel ku soo galay kulankii Real Sociedad ee Europa League ka dib markii uu bishii Janaayo ka soo dhaqaaqay Atalanta. Tababaraha ayaa sidoo kale aaminsan in Mason Greenwood uu qaban karo shaqada saxda ah ee uu uga baahan yahay Jadon Sancho.
Borussia Dortmund ayaa haatan xirtay qaar ka mid ah xiddigii hore ee ku xirnaa Jadon Sancho waxayna u ogolaatay ilaa 80 milyan oo ginni.
Laakiin tababare Ole ayaa u sheegay The Athletic inuu ku xoojin doono labo aag kale, gaar ahaan dhanka daafaca.